Semalt Islamabad Expert: Inona no SEO ary iza no manam-pahaizana SEO?
Raha mitady hanatsara ny tranokalanao ianao, dia mila mpitsabo SEO ianao. Na izany aza, alohan'ny ahafahanao manomboka ilay dingana, dia mila mahatakatra ny zavatra tokony hataonao ianao. Inona àry ny SEO? Ny SEO ( fikarohana fanatsarana) dia ny fampiasana tetika isan-karazany toy ny teny fanalahidy sy lohahevitra fototra izay mamorona fifamoivoizana amin'ny tranonkala iray ary manampy ny mpampiasa hahita vaovao momba ny milina fikarohana. Ho anao manana tranonkala tsara kokoa, mila mpitsabo SEO izay mahatakatra ny tetikady SEO ianao. Ny asan'ny manampahaizana dia ny hikaroka amin'ny aterineto, hamantatra sy hampihatra tetikady hafa izay hanatsara ny valin'ny fikarohana.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia mamaritra ireto torohevitra mahasoa ireto momba izany - certified equipment appraisal.
Ahoana ny fahitanao ny manam-pahaizana SEO?
Ny manam-pahaizana SEO tsara dia manohy ny fironana rehetra.
Tahaka ny asa hafa rehetra, ho hitanao fa ny manam-pahaizana SEO sasany dia tsara kokoa noho ny hafa amin'ny fomba hafa noho ny iray. SEO tahaka ny teknolojia hafa miovaova foana. Ho hitanao fa ny fomba fijerin'ny fikarohana iray ao amin'ny Google 5 taona lasa izay dia tsy mitovy amin'ny fikarohana natao androany. Isan'andro, manamarina ny tadiavin'ny mpampiasa ny fitaovan'ny fikarohana, ary mamaritra ny fikarohana nataony izy ireo mba hialana amin'io kritera io. Ohatra, ho hitanao fa amin'izao fotoana izao, rehefa mikaroka tenimiafina manokana ao amin'ny Google ianao, dia azo atolotra amin'ny lisitr'ireo "karazana" ianao satria nahatsapa fa ny olona dia mety hiditra amin'ny lisitry ny zavatra voalohany alohan'ny hijerena ny hafa. Nofaritan'izy ireo ny algorithma tamin'ity, mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Ny SEO iray manam-pahaizana manokana dia tokony ho afaka hamantatra sy hitazona ny fironana vaovao rehetra.
Tsy maintsy mahita fomba vaovao hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Samy hafa ny tranonkala, ary raha mety ho ny tetikasan'ny SEO dia mety ho an'ny tranonkala rehetra, ny mpitsabo SEO tsara dia tokony ho afaka hamantatra fomba vaovao hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Tokony ho afaka hamakafaka sy hitady fomba izay miavaka amin'ny tranokalanao izy ireo..Ny fampiakarana ny fifamoivoizana dia midika fa ny olona atolony ho an'ny tranokalanao dia mifandraika amin'ny marika manokana anao. Ohatra, raha tranonkala fandraharahàna, ny tranonkalanao dia hahasarika mpividy izay vonona hividy ny vokatrao sy ny serivisinao.
Tsy maintsy mahatakatra ny tetikady SEO, ny maha-zava-dehibe azy ary ny fomba fampiasana azy.
Misy zavatra marobe tokony hampahafantarina amin'ny fanatsarana tranokala. Ny manam-pahaizana SEO tsara dia tokony ho afaka hampiasa azy ireo ary hahatakatra ny maha-zava-dehibe azy ireo. Anisan'izany ireto:
Links. Ny rohy mankany amin'ny tranonkala hafa dia manan-danja rehefa manatsara tranonkala iray. Ny manam-pahaizana SEO tsara dia tsy maintsy mahatakatra ny maha-zava-dehibe azy sy ny fotoana / fomba fampiasana izany.
Ny maha-zava-dehibe ny fampiasana marketing (content) . Izany dia fitaovana ara-barotra manan-danja.
Ny sandan'ny media sosialy. Ny haino aman-jery sosialy dia nanjary nalaza ho malaza indrindra ary mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny SEO
Vidin'ny paikady mitsinjara. Na dia tetikady SEO antitra aza izany, dia fomba iray tena ilaina ihany koa ny famokarana fifamoivoizana amin'ny tranokala iray.
Video SEO. Izany dia tetikady vao haingana ary tena ilaina. Ny manam-pahaizana manokana dia tokony ho afaka hanohy izany tetika vaovao izany.
Mivoatra hatrany ny tetika SEO. Raha toa ny tetika taloha tahaka ny teny fanalahidy sy ny Meta tags dia manaporofo fa ilaina, ny fironana vaovao dia mahomby ihany koa, ary mpitsabo SEO tsara dia tokony hamantatra sy hampiasa azy ireo araka ny tokony ho izy.